बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज - satkar post
बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर १२ गते बिहीबारको राशिफल । इ.स. २०१९ नोभेम्बर २८।ने.सं. ११४० थिंलाथ्व। मार्ग शुक्लपक्ष, द्वितीया, १९:१२ उप्रान्त तृतीया ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) अव’सरको खोजीमा केही दौ’डधुप गर्नुपर्ला। अव’सर हातलागी नभए पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। प्रयत्न गर्दा पछिलाई फाइदा हुनेछ। तत्कालै सम|स्या समा’धान नहुन सक्छ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोप’कारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। कम’जोरीका बा|बजुद काँधमा जिम्मे’वारी थपिनेछ। काम रो’किनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। स्वा’स्थ्यका लागि आ’राम लिनुपर्ने अवस्था रहनेछ। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कामको चा’प बढ्नेछ भने शरीरमा कम’जोरी अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्य र अर्थका हिसाबले पनि दिन क’मजोर रहनेछ। प’रिस्थितिले अ’प्ठ्यारा चु’नौतीहरूसँग स’म्झौता गराउन सक्छ। अ’वसरका लागि दौडधुप गर्नुपर्ला। तत्काल लाभ नभए पनि पछिका लागि काम गर्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्, गो’पनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) माहोल रमाइलो रहनेछ तर विशे’ष निम्तो प्राप्त हुनाले आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघा’ट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको ब’न्धन कसिनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अ’प्ठ्यारा परिस्थि’तिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसामा राम्रै फाइदा हुनेछ। साथीभाइसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। व्यावसायिक यात्राको योग छ। कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) स्रोतसाधन जु’ट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सजिलै सम्पादन हुन सक्छ। पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउनेछ। चु’नौती प’न्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। प्रति’स्पर्धामा उ’त्रनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। ई’र्ष्या गर्नेहरूलाई मिहिनेतको पाठ सिकाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा विभिन्न अ’वसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। चिताएको काम रोकिनाले लक्ष्य प्राप्तिमा विल’म्ब हुनेछ। समयको मागलाई ध्यान दिन नसक्दा पछि परिनेछ। घरायसी काम रोकिन सक्छ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिए पनि लगनशील बन्न नसक्दा लक्ष्यमा पुग्न मुस्किल पर्नेछ। स्वास्थ्यबा’धाले सताउन सक्छ। काममा लामो समय जु’ट्न नसकिएला। बुद्धिको उपयोगले मात्र लाभ उठाउन सकिनेछ। कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) परिस्थि’तिअनुसार नि’र्णय लिन नसक्दा काम दोहोर्याउनुपर्नेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बा’धा पुर्याउनेछन्। हि’स्सेदारसँग अस’मझदारी बढ्नाले स’म्झौता भं’ग हुन सक्छ। बे’सुरमा दिइएको वचनले स’मस्या नि’म्त्याउनेछ। महत्त्वपूर्ण योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। अनावश्यक साइनो गाँसी नजिकिनेहरूसँग सा’वधान रहनुहोला। स्वयं नजुट्दा काम बि’ग्रनेछ। तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) परि’स्थिति अनुकूल बन्नाले नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्ध’न क’सिलो हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। उ’द्योग र व्यापारमा विशे’ष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ। बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) सामान्य आम्दानी भए पनि काम पूर्ण सम्पादन नहुन सक्छ। आफ्ना क’मजोरीबाट अरूले फाइदा उठाउने चे’ष्टा गर्नेछन्। आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा पनि दु:ख पाइनेछ। ख’र्च हुने डरले सताउन सक्छ। तापनि सम्पादित कामबाट धन लाभ हुनेछ। मिहिनेतले आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ भने पछि फाइदा हुने काममा स’म्झौता हुन सक्छ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) रमाइलो जमघ’टमा सहभागी बन्ने अ’वसर जुट्नेछ। मिहिनेतको परिणामले आत्मविश्वास बढाउनेछ। वि’शेष अव’सरले प्रसन्नता दिलाउनेछ भने सहयोगीहरूको साथले काममा उत्साह जगाउनेछ। वि’शिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघा’ट हुनेछ भने आकर्षक उपहार प्राप्त हुन सक्छ। रमाइलो जम’घटको आनन्द प्राप्त हुनेछ। केही समय लागे पनि नयाँ कामको अव’सर प्राप्त हुनाले हौसला जाग्नेछ। मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) भैपरी आउने सम’स्याले ख’र्च बढाउन सक्छ। सञ्चित रकम अरूका हातमा जानाले अर्थअभाव देखापर्नेछ। परिवारजनबाट टा’ढिनुपर्ला। लोभ देखाउनेहरूले फ’साउन सक्छन्। अव’सरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। क’रकापमा परी काम वा वि’शेष निर्ण’य गर्नुपर्ने परि’स्थिति आउन सक्छ। आफ्ना कम’जोरीबाट लाभ उठाउनेहरू सक्रिय हुने हुँदा साव’धान रहनुहोला। ऋ’णभार बढ्न सक्छ। कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) वि’शेष अवस’र पाइनेछ र मिहिनेतले आम्दानी बढाउनेछ। दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन होला। पढाइमा प्रगति हुनेछ। व्यापार, सा’झेदारी र स’ट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। सञ्चित धनको उपयोगले लाभ दिलाउनेछ। मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ। प्रतीक्षा गरिएको काम बन्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम पनि हातलागी हुनेछ। मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) अनुभव देखाएर नयाँ काम हातपार्ने समय छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ। वि’शेष भेटघा’टले उत्साह जगाउनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम गर्ने अव’सर दिलाउन सक्छ। सामाजिक जिम्मे’वारी प्राप्त हुनुका साथै आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व पनि हातलागी हुने समय छ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। दिगो काममा हातहाल्ने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। नेपाली पात्रोबाट